Wararka - Qandaraaska mashruuca ugu weyn ee kaydinta qoraxda ee Galbeedka Afrika: Solar 390MW Solar + 200MW keydin tamarta baytariga ah
Qandaraaska mashruuca ugu weyn ee kaydinta qoraxda ee Galbeedka Afrika: 390MW qoraxda + 200MW keydinta tamarta bateriga
Soosaarahan warshad caan ah oo isku dhafan oo ku taal Togo, Galbeedka Afrika ayaa bilaabay hindise loogu talagalay mashruuc ballaaran oo qorraxda lagu kaydiyo oo lagu kaydiyo tamarta, beerta ayaa soo saartay warqad ujeedkeedu yahay (EOI). Soo-saaraha kaabayaasha Afrika-Arise Integrated IndustrialPlatforms (Arise IIP) wuxuu la shaqeynayaa dowladda Jamhuuriyadda Togo ee ku taal Adétikopé Industrial Platform (PIA), aag dhaqaale oo gaarayo 400 hektar oo u dhow caasimada dalka, Lomé. Aagga waxaa ku yaal xarun warshadeed iyo saad, oo marin u siin doonta Galbeedka Afrika iyada oo loo sii maro xeebta.
Arise IIP waxay soo saartay ogeysiis 8-dii Luulyo oo ay ku casuuntay EOI in lagu daro 200MW nidaamka keydinta tamarta batteriga(BESS) iyo kaabayaasha isku xidhka 161KVA ee laxiriira shabakada isku xidhka saldhigga korantada ee sawir qaadista ee DC oo leh awood dhan 390MWp. Sida ku xusan ogeysiiska, mashaariicdani "waxay inta badan siiyaan PIA awood muddo dheer la isku halleyn karo oo waarta."
Kaqeybgalayaashu waxay leeyihiin laba ikhtiyaar, ama qandaraas qandaraas injineernimo, soo iibsi iyo dhisme (EPC) iyo hawlgallo shan sano ah iyo dayactir (O&M), ama la saxiixida heshiis iibsi awood 20-sano ah (PPA) Arise IIP oo ah qaab wadajir ah . Codsadeyaashu waxay u baahan yihiin ugu yaraan hal khibrad mashruuc oo isku mid ah, waxayna leeyihiin awood dhaqaale oo ay ku bilaabaan shaqada isla marka ay qandaraaska helaan ka dib, waxayna haystaan ​​agab ku filan, agab farsamo, iyo shaqaale ku habboon shaqada mashruuca.
Dukumiintiga tartanka waxaa la bixin doonaa inta u dhexeysa 20-ka ilaa 30-ka 30, 2021-ka, intaas ka dib waxaa jiri doonta 12 toddobaad oo lagu soo bandhigo dalabyada. Mashruucan ayaa ah kii ugu weynaa ee noociisa ah ee ilaa iyo hadda laga shaaciyo qaaradda Afrika. Markii hore, waxay ahayd tiro yarqoraxdaoo lagu daray mashaariicda keydinta tamarta, oo ay ku jiraan mashaariicda ku xiran shabakadda iyo micro-grid. Mashaariicdii ugu dambeeyay waxay inta badan ku yaalliin Madagascar, Somaliland iyo Mozambique. . Koonfur Afrika ayaa sidoo kale taariikh sameysay iyadoo dalbatay mashaariic keydinta tamarta ah oo dhaafsiisan 1GWh si looga dhigo mashruucyada tamarta la cusbooneysiin karo ee la diri karo iyadoo waddanku uu doonayo inuu si dhakhso leh u iibsado awoodda tamarta si uu uga kabto yaraanta wax soo saarka.
Hangchi Technology Co., ltd waxay bixisaa dhamaan wax soo saarka qoraxda laga soo bilaabo fiilooyinka ilaa baytariyada, waxaan sidoo kale u habeynnaa nidaamka qoraxda sida ay macaamiisha wax u weydiinayaan.
Si naxariis leh nala soo xiriir gavin@hangchisolar.com
Waqtiga boostada: Jul-30-2021